Soomaaliya oo cambaareysay weerar ka dhacay Sacuudiga - Awdinle Online
Soomaaliya oo cambaareysay weerar ka dhacay Sacuudiga
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay weerar Kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta Gudaha dalka Yemen ay ku qaadeen Garoon diyaaradeed oo ku yaal Koonfurta dalka Sacuudi carabiya.
Qoraal kooban oo la soo dhigay barta twitter-ka Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa aad loogu cambaareeyay weerarkaas, waxana lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay falkaas, isla markaana uu yahay mid argagaxiso.
“ Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa beegsiga maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku bartilmaameedsadeen garoonka diyaaradaha Abha ee Sacuudi Carabiya, waxayna aaminsan tahay in weerarka argagixiso ee noocan oo kale ah uusan nabad ka dhalin doonin gobolka, laakiin uu carqalad ku yahay geeddi-socodka nabadda ee Yemen oo uu wiiqayo amniga iyo xasilloonida ayaa lagu yiri” Qoraalka Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladda Sacuudiga oo dhankeeda shalay ka hadashay weerarkaas ayaa sheegtay inay fashilisay weerar loo adeegsaday gantaal lagu rakibay waxyaabaha qarxa, kaas oo kooxda Xuutiyiinta ay ku weerareen Garoonka diyaaradaha Abha ee Koonfurta Sacuudiga.
Previous articleGuddoomiye Cuusb oo loo Magacaabay degmo ka tirsan Gobolka Banaadir
Next articleMidowga Musharixiinta oo Banaanbax kaga dhawaaqay Muqdisho